musha nyika dzakabatana Vatambi veBasketball Kawhi Leonard Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yeNBA Star inonyatso kuzivikanwa nezita rekuti Nick "Iyo Klaw". Yedu Kawhi Leonard Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe wevatambi vakanyanya kuzvidzivirira weNBA yaakambowana. Nekudaro, vashoma chete vateveri vanofunga yedu Kawhi Leonard biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Kawhi Leonard Mhuri Yepashure uye Hupenyu hwepakutanga:
Kawhi Anthony Leonard akazvarwa pazuva 29th raJune 1991 kuna amai, Kim Robertson uye baba vanononoka, Mark Leonard (wemotokari washer) muguta reLos Angeles, California. Akauya pasi pano semudiki pavana vashanu, akaberekwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake; Kim Robertson naMark Leonard.
Nyika yeAmerican yenyika yeAfro-American dzinza rinobva mumhuri isina kunaka yemhuri. Kawhi ane mhuri yake yeMberengwa kubva kuAmerica uye midzi yemhuri yemamai kubva kuAfrica. Akakurira kwaakaberekerwa kuCalifornia kwaakakurira pamwe nevakoma vake vakuru; Miesha Slayton, Kimesha Monae Williams, nevamwe vaviri vanozivikanwa zvishoma nezve.
Pakutanga achiri mudiki, hukama pakati pevabereki vaKawhi Leonard hwakatanga kuparara, chiitiko chakatungamira kurambana. Chero mwana akararama kuburikidza nekuyaruka kwevabereki achangoziva chete zvakadzama kurwadziwa kwepamoyo uye kukuvadza maitiro epfungwa aungave nawo. Kuna Little Kawhi, haana kusiiwa chero nevabereki vake. Mutambo we basketball uye nhabvu wakabatsira kusimbisa hukama hwaBaba-Mwanakomana sezvo vese vari vaviri vachiwedzera kufarira mune zvemitambo. Kuda basketball kwakazokunda Leonard nababa vake mukutsigira kwakazara kwemwanakomana wavo achitora basa mairi.
Ndichikura mu LA, Kawhi Leonard sevamwe vese vacheche vekuAmerican vaigara vachienda kunotamba basketball neshamwari dzake. Kuda kwake mutambo uyu kwainge kwakurisa zvekuti akaomerera pakutamba basketball manheru mushure mekunge baba vake vapfurwa akafa mu2008. Zvinosuruvarisa, mushure memutambo, akaputsa mupfungwa.
Kawhi Leonard Dzidzo Uye Basa Rokuvaka:
Rufu rwababa vake rwakarova zvikuru Leonard uyo panguva iyoyo aidzidza paCanyon Springs High School kuMoreno Valley, California. Sezvo akarasikirwa nemudiwa wake wenhabvu pamwe nemusimudziri webhasikiti wake, Leonard akafunga kuita baba vake vanononoka kudada nekupika kuti ave mutambi weBasketball akagwinya Kunyangwe hake achitamba mitambo iyi, Leonard mudiki akaita mamakisi ake.
VERENGA Michael Jordan Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Kuti agadzire hwaro huri nani pabasa rake rebhasikiti, Leonard akatanga chikoro chakachinjirwa kuMartin Luther King High chikoro chaakapinda naKing High Wolves, timu yebhasiketi.
Pakati pegore rake rekupedzisira paMartin Luther King High Chikoro, Kawhi Leonard neshamwari yake Tony Snell vakatungamira timu yavo kuenda ku30-3 rekodhi panguva yaakapihwa 'California Mr Basketball'. Nekuda kwekuita kwaKawhi Leonard muchikoro chesekondari, akaverengerwa mumatanho ekutsvagisa e2009 saNo. 8 mudiki kumberi uye weNo. 48 mutambi munyika yese.
Kawhi Leonard Kurarama Kwepakutanga Hupenyu:
Iyoyo 2009 yakafanana, Kawhi Leonard akanyoresa kuSan Diego State University mugore rimwe chete. Paaive kuyunivhesiti, akabatana neAztecs uye yakaverengeka 12.7 nzvimbo uye 9.9 inodzokera kuchikwata chake. Kubatsira kwake kuchikwata kwakabatsira Aztecs kuwana 25-9 rekodhi, iyo feat yakavatungamira kuhwina mukombe weWest West Conference (MWC) mutambo wetsiva.
Kawhi Leonard Road To Fame Nyaya:
Nekuda kwekubudirira kwavo kukuru mumakwikwi eMWC, maAztec akagamuchira otomatiki bhidha kumakwikwi eNCAA. Zvinhu hazvina kufamba zvakanaka sekuronga. Chikwata chake chakarasikirwa muround rekutanga kuenda Tennessee, 62-59 naLeonard vachinyora gumi nembiri uye gumi rebound. Leonard akaodzwa mwoyo nemhedzisiro yemutambo wavo asi aive akatsunga kuramba achizadzisa chishuwo chababa vake.
NeGUTS yekusakanda mapfumo pasi, Kawhi Leonard akazoenderera mberi achitungamira timu yake kuti ibudirire mumakundano eNCA. Panguva ino, maaztecs akakwira mune inotapira gumi nematanhatu, asi kamwe kamwe akarasikirwa kune nyika Champions, UConn. Kukunda uku kwakamuita kuti ave mutambi anodzivirira ari nani.
Kawhi Leonard Rise To Fame Nyaya:
Pasina kupera nguva refu mushure memakwikwi eNCA, Leonard akabva kuSan Diego State sezvo akasarudzwa senge nhamba 15th yakazara kutora mu 2011 NBA drafti neIndiana Pacers. Akazotengeswa kuSan Antonio Spurs kwaakatanga kusunungura hunyanzvi hwake hwekudzivirira.
Nekukurumidza kusvika kunguva yekunyora, Leonard akatsungirira kukwikwidza kwemamiriro ekunze kukurumbira mumwedzi ichangopfuura kuti ive yeimwe inopisa dzimba dzechidiki muNBA. The 2014 na2019 ndiwo makore akabudirira kwazvo kuna Kawhi sezvo akahwina mibairo yakafanana inoti- shasha yeNBA, fainari MVP uye sarudzo muNBA Yese-Inodzivirira Timu.
Pasina kupokana, zviroto zvaakange agovana nababa vake mushakabvu makore mazhinji apfuura zvakazadzikiswa. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Kawhi Leonard Hukama Hupenyu:
Nekukwira kwake mukurumbira uye kuwana rukudzo rukuru mumabasa, zviri pachena kuti vazhinji vevateveri veNBA vanofanirwa kunge vakabvunza kuti musikana kana mukadzi waKawhi Leonard angave ani. Kutanga, maererano nehukama hwake, Leonard achiri kuzoroora panguva yekunyora, asi ane musikana.
Leonard ave achizivikanwa kuti akambodanana nemukadzi mumwe chete kubvira zvaakava nemukurumbira. Paseri penyeredzi yakabudirira yeNBA, pane musikana akanaka kwazvo mumunhu waKishele Shipley.
Ose maviri rudo-shiri anga achidanana kubvira 2014. Leonard haapi akawanda kubvunzurudzwa nezvake uye iwo maringe nenyaya yekuti vakasangana sei zvichiri chakavanzika. Sekureva kwazvakaitika, Kawhi Leonard akasangana nemusikana wake apo vaviri vaipinda University imwe chete.
Kawhi Leonard musikana waKishele Shipley akazvara mwana wavo wekutanga - musikana, Kaliyah Leonard uyo akazvarwa muna Chikunguru 2016. Muna Kurume 2019, mudiki Kaliyah Leonard aive nehama.
Kawhi Leonard Hupenyu Hwemhuri:
Leonard anobva kumhuri yepasi-kirasi kumashure uye nekutenda kune basketball, mhuri yake yose ikozvino inonakidzwa nekusimudzirwa mune yavo chimiro. Muchikamu chino, tinokuunzira chokwadi pamusoro pehupenyu hwake hwemhuri.
Nezve baba vaLeonard vanononoka:
Maka Leonard aive baba vaKawhi Leonard. Pakutanga kufa kwake, akapinda mubhizimusi rekuwacha mota kuti ariritire mhuri yake. Mark aive nekuwacha mota muCompton kwaakaurawa mugore ra2008. Akatora nguva yake kutamba basketball nenhabvu naLeonard uye akamutsigirawo paakasarudza kutamba basketball pamusoro pebhola.
Nezve amai vaLeonard nevanin'ina vake:
Kim Leonard ndiamai vaKawhi Leonard. Iye zvakare ane vanun'una vana vakuru avo chete mazita evaviri - Miesha Slayton naKimesha Monae Williams - akataurwa pasocial media. Kimesha anga aine rimwe dambudziko munguva pfupi yapfuura. Akambosungwa asina bhera nekuda kwekupondwa kwemakore makumi masere nemasere Alaf Anis Assad munaGunyana 84. Leonard anoda kuchengeta ruzivo nezve zvakavanzika zvake.
Nezve hama dzaLeonard:
Kure kubva kumhuri yepedyo yaLeonard, ambuya vake amai vake vanonzi Wanda Robertson apo vanasekuru vababa vake ndiJosephine Anna Ford naHenry Francis Leonard. Muzukuru wake mutambi wenhabvu weAmerica Stevie Johnson. Ruzivo nezvekuru vake amai vamai, babamunini, babamunini, babamunini, uye babamunini hazvizivikanwe zvakanyanya panguva yekunyora.
Kawhi Leonard Hupenyu Hwako:
Nekuda kwekusavapo kwake pasocial media, mibvunzo yakawanda yakamutswa maererano nehupenyu hwega hwaLeonard. Mukuona kwekuda kuziva kwakadai, tinokuunzira maitiro ehunhu hwake.
VERENGA Shaquille O'Neal Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Kutanga, Leonard's Persona isanganiswa weCancer. Iye munyoro, akadzikama uye haadi kutariswa zvakanyanya kubva kuruzhinji. Leonard anodzivisa kugovana zvakawanda zvezvaari pane vezvenhau. Asides basketball, ane zvekuzvivaraidza nazvo uye zvekunakidzwa munhabvu sezvatakamboyeuka zviitiko zvake zvebhora nababa vake.
Kawhi Leonard Hupenyu:
Kawhi Leonard akakosha huwandu hunofungidzirwa hwemamiriyoni makumi matatu nemashanu emadhora panguva yekunyora. Kwakatangira hupfumi hwake kunonyanya kubva pabhasiketi yake yekuedza uye kutsungirira kunobata neNike iyo yakazopera muna 35. Ongororo yemararamiro ake inoratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha hunooneka nyore nyore nekutenga kwake imba.
Kutanga nefuma yaLeonard, akatenga imba yakamisikidzwa maeka mashanu epasi kuRancho Santa Fe nemari inosvika ye $ 13.3 mamirioni. Iyo NBA nyeredzi ichiri kuchengetedza yakaderera-kiyi hupenyu hwakavanzika sezvo iye achiramba achishandisa yake 20-gore-okuberekwa SUV iyo yaidaidzwa zita Gesi Guzzler.
Kawhi Leonard Untold Chokwadi:
Kawhi Leonard akatumidzwa zita "Iyo Claw kana Claw" nekuda kwehunyanzvi hwake hwekubhora-bhora inova imwe yemano akasarudzika ayo akamupa kugona kwake kwekudzivirira.
Leonard muKristu uye haabate kutaura nezvekutenda kwake uye nekutenda muna Mwari. Akave nenguva dzinoverengeka akataura nezve kuvimba kwaakaita naMwari kuti atore mamiriro ake pese paanenge akuvara. Kutenda kwake kwechitendero kunoonekwa mune iyo tatoo yaakanyorera pamuviri wake.
Kunyangwe iye ane tarenda NBA nyeredzi anozivikanwa nekuda kwake akanyarara chimiro, iye akaisa mamwe ma tattoo anokodzera chimiro chake munyika yebhasikiti. Akanongedza paruoko rwake rwerudyi Muchinjiko uye zvakare mazwi "Usatya Mwari".
Leonard ane chinhu chekunwa asi kwete zvakawanda zvinozivikanwa nezvekuti anoputa here kana kuti kwete. Paakabvunzwa nemumwe wake waaishanda naye Serge Ibaka muna Chikumi 2019 kuti ndezvipi chikafu chisina kujeka chaasingakwanise kumirira kudya mushure mekuchengeta muviri wake gore rese. Mhinduro yake yakanga iri "Ini ndiri kungonwa doro uye kudya zvidziro nguva dzese."
Thanks for reading vedu Kawhi Leonard Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!